यस्ता हुन्छन् चलाख व्यक्तिका आँखा, यस्तो आँखा हुने महिला पुरुषका लागी खतरनाक ! – Khabaarpati
December 29, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यस्ता हुन्छन् चलाख व्यक्तिका आँखा, यस्तो आँखा हुने महिला पुरुषका लागी खतरनाक !
मानिसको स्वभाव र गुणबारे शास्त्रमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्ता गुणले ती व्यक्ति तथा उनीसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिमा पर्ने असरबारे पनि शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।राम्रा गुण हुनुमा पनि शरीरिका विभिन्न अंगले फरक फरक अर्थ राख्ने मान्यता छ । जस्तै कि आँखा । भनिन्छ जो कसैलाई पनि आँखामा गहिरोगरी हेर्यो भने सम्पूर्ण ब्यक्तित्व आँखाबाटै बुझ्न सकिन्छ । यसैकारण आँखालाई मनको ऐना पनि भनिन्छ।समुन्द्र शास्त्रमा पनि आँखाँको वर्णन निक्कै राम्रोसँग गरिएको छ । यसमा भनिएको छ कि आँखाको बनौटबाट नै ब्यक्तिको गुण दोष थाहा पाउन सकिन्छ ।
चलाख ब्यक्तिका आँखा-निला आँखा सुन्दर मानिन्छ तर सुन्दर आँखाको पछि नलाग्नुस् । यस्ता ब्यक्ति निक्कै चलाख हुन्छन् र विश्वास गर्दा समस्या हुन सक्छ । किनभने यिनीहरु विश्वास तोड्न कुनै आइतबार कुर्दैनन् । आफ्नो स्वार्थपूर्ति भयो भने यिनीहरु जो सुकैलाई पनि धोखा दिन सक्छन् ।
यस्ता आँखा पनि खतरनाक-काला र गोला आँखा हुने ब्यक्तिसँग पनि बँच्नु राम्रो हुन्छ । किन भने उनीहरुको आँखा मात्र होइन स्वभाव पनि साँपको जस्तो हुन्छ । यस्ता आँखा हुनेहरुले मौका मिल्ना साथ फाइदा लिन खोज्छन्।
साना आँखा हुनु नराम्रो-जसको आँखा साना हुन्छन् त्यस्ता ब्यक्तिमा साहसको कमि हुन्छ । यिनीहरुको सोच्ने दायरमा पनि साँघुरो हुन्छ । यिनीहरु पनि आफ्नो फाइदालाई अधिक महत्व दिन्छन् । अरुप्रति साहनुभुति कम हुन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
राति सुत्दा कपाल खुल्ला छोड्नुहोस्, सुत्ने बेलामा ध्यानै पर्ने ४ कुरा